Ny trano fonenana amin'ny ankapobeny amin'ny ankapobeny dia miaina ao anatin'ny tontolo feno henjana, tahaka ny mpiandry varavarana ho an'ny fifanatrehana rehetra ao an-toerana izy ireo, dia maheno zavatra maro tokoa momba ny zava-mitranga izy ireo satria nanao izany manokana.
Izy ireo dia mahazo 'tapa-kazo' amin'ny vahoaka sy mpivarotra satria hita ho toy ny fanaovana entana ny vola Ho an'ny asa kely - marina izany raha tena mameno ny fivarotana azy ireo. Saingy ny fiainana andavanandro amin'ny mpiasam-pandraharahana dia fahadisoam-panantenana, fanerena avy amin'ny andaniny rehetra, fifaninanana avy amin'ny solontena hafa ary ny filàna ny fananganana azy.
Miady mandrakariva amin'ny olona mahita azy ireo ho ratsy ratsy izy ireo, ahoana no tianao hiasana amin'izany atmosfera izany?
Tiany ny mifampiraharaha amin'ireo olona izay sambatra, mahafinaritra, manome azy ireo fotoana tsara, mendrika ny fitsaràny, miasa mba hifehezana azy ireo, dia mavitrika, mamaly ary mahitsy. Raha fintinina dia olombelona izy ireo izay mamaly ny zavatra rehetra tiantsika rehetra.
Ny zavatra hafa tsy tokony hataonao dia ny mametraka azy ireo na manandrana manao fampisehoana sasany mba handresen-dahatra azy ireo fa ianao no mpividy tsara indrindra ao amin'ny faritra, ny fahatsaram-pon'ny sasany (raha tsy mijery ny tsy mahay) mifandraika amin'ny fangatahana torohevitra amin'ny toe-javatra iray Te hividy zavatra tsy anananao ianao ny vola Fa mbola mety hitondra fampahalalana fanampiana tsy nampoizina - tsarovy fa te-hivarotra fananana haingana araka izay tratrany araka izay tratrany izy ireo. Raha manao ezaka mafy ianao dia ho faly hanampy anao hahatratra ny tanjonao.
ASSOCIATION NATIONAL OF AGRICULTURE http://www.naea.co.uk
JELLOW PAGES ONLINE http://www.yell.com
Ny fifandraisana rehetra dia lalana mivatravatra, mahatakatra ny fomba fijery hafa